SFP Transceiver Module ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China SFP Transceiver Module စက်ရုံ
10Gb / s 40KM SFP + Optical Transceiver OPS551X3CDL40
OPS551X83CDL40 10G SFP + transceiver မ်ားကို 802.3ae လျှင် 10G Ethernet 10G BASE-ER / EW အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး 1.25Gb / s မှ 11.1Gb / s အထိ data rate ကို support လုပ်နိူင်တယ်။ SFP + MSA မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း I2C interface ကိုအသုံးပြုပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။ ။ ထူးခြားချက်များ 1. 10Gb / s serial optical interface 802.3ae 10GBASE-ER / EW နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း။ 2. SFF-843131 နှင့် SIG-8431 အတွက်အထူးကောင်းမွန်သောအချက်ပြချက်များ Gigabit သေးငယ်သောပုံစံသေးငယ်။ တပ်ဆင်ထားသော“ SFP +” 3.2-w ...
10Gb / s 1310nm Datacom SFP + Optical Transceiver OPSP311X3CDL10
OPSP311X3CDL10 optical transceiver များသည်တစ်ခုတည်းသော mode fiber (SMF) နှင့် data communication အတွက် 10Gb / s serial optical interfaces များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ transceiver သည် 9.953- 11.1Gb / s ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ transceiver ဒီဇိုင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်နှင့်သုံးစွဲသူများအား datacom အတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ 1. ပူပြင်းစွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း 2. 10Gb / s serial optical interface ၃။ အကွာအဝေး ၁၀ ကီလိုမီတာ ၄။ SFP + MSA နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၅။ duplex LC connector နှင့်အတူ SFP MSA အထုပ် 6. ဒစ်ဂျစ်တယ် Diagnostic Mo ...
10Gb / s တိုတိုလှိုင်းအလျား Pluggable SFP Transceiver OPSP851X3CDLM
OPSP311X3CDL10 optical transceiver များသည်တစ်ခုတည်းသော mode fiber (SMF) နှင့် data communication အတွက် 10Gb / s serial optical interfaces များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ transceiver သည် 9.953- 11.1Gb / s ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ transceiver ဒီဇိုင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်နှင့်သုံးစွဲသူများအား datacom အတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ●ပူပြင်းစွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း● ၁၀ ဂစ်ဂစ် / စအမှတ်စဉ် optical မျက်နှာပြင်● ၁၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအထိ၊ ● SFP + MSA နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ● duplex LC connector နှင့်အတူ SFP MSA အထုပ်●ဒစ်ဂျစ်တယ် Diagnostic မော်နီတာ ...
10Gb / s 80KM SFP + Optical Transceiver OPSP551X3CDL80
OPSP551X3CDL80 10G SFP + transceiver မ်ားကို 802.3ae လျှင် 10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး 1.25Gb / s မှ 11.1Gb / s သို့ data-rate နှုန်းကို support လုပ်နိူင်တယ်။ SFP + MSA မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း I2C interface မှတဆင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။ ။ ထူးခြားချက်များ● 10Gb / s serial optical interface သည် 802.3ae 10GBASE-ZR / ZW နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်● SFF-8431 အတွက်လျှပ်စစ်မျက်နှာပြင်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ 8.5 နှင့် 10 Gigabit အသေးစားပုံစံအချက်ပြပလပ်ဂျူး SFP + အတွက်အထူးသတ်မှတ်ချက်များ။ 2-wire ...
10Gb / s SFP + BIDI Optical Transceiver OPSB321X3CDL10
OPSPB321X3CDL10 optical transceiver များသည်တစ်ခုတည်းသော mode fiber (SMF) နှင့် data communication အတွက် 10Gb / s serial optical interfaces များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ transceiver သည် 9.953- 11.1Gb / s ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ transceiver ဒီဇိုင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်နှင့်သုံးစွဲသူများအား datacom အတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ●ပူပြင်းစွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း● ၁၀ ဂစ်ဂစ်နှုန်းအထိ serial optical interface ●အကွာအဝေး ၈၀ ကီလိုမီတာ● SFP MSA နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ● duplex LC connector နှင့်အတူ SFP MSA အထုပ်●ဒစ်ဂျစ်တယ် Diagnostic စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ...
10Gb / s 1550nm Multi-rate XFP Optical Transceiver OPXP551X3CDL40
OPXP551X3CDL40 10G 1550nm XFP transceiver မ်ားကို 10G Ethernet 10G BASE-ER / EW အတွက် 802.3ae နှုန်းနှင့် 10G SONET OC-192 / SDH STM-64 တို့အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး ၉.၉၅၃Gb / s မှ ၁၁.၁၁ Gb / s အထိ data rate ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ XFP MSA တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ရောဂါရှာဖွေခြင်း I2C interface မှတဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ Transceiver ဒီဇိုင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်နှင့်သုံးစွဲသူများကို datacom နှင့် telecom application များအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ●အပူချိန်ညှိနိုင်ခြင်း● ၉.၉၅Gb / s သို့ ၁၁.၁ Gb / s နှုန်းနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့ခြင်း● Bel ...
10Gb / s 1310nm Multi-rate XFP Optical Transceiver OPXP311X3CDL10
OPXP311X3CDL10 10G 1310nm XFP transceiver မ်ားကို 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW 802.3ae နှုန်းနှင့် 10G SOI OC-192 / SDH STM-64 တို့အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး 9.953Gb / s မှ 11.1Gb / s သို့ data-rate နှုန်းကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ XFP MSA တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းရောဂါရှာဖွေခြင်းကို I2C interface မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ Transceiver ဒီဇိုင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်နှင့်သုံးစွဲသူများကို datacom နှင့် telecom application များအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ●အပူချိန်ညှိနိုင်ခြင်း● ၉.၉၅Gb / s သို့ ၁၁.၁ Gb / s နှုန်းနှုန်းများထောက်ပံ့နိုင်သည်။ အောက်တွင် ...
10Gb / s 850nm Multi-rate XFP Optical Transceiver OPXP851X3CDLM
OPXP851X3CDLM 10G 850nm XFP transceiver မ်ားကို 802.3ae လျှင် 10G Ethernet 10G BASE-SR / SW အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး XFP တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း 9.953Gb / s မှ 11.1Gb / s အထိအချက်အလက်နှုန်းကို I2C interface မှတဆင့်ရရှိနိုင်တယ်။ MSA. transceiver ဒီဇိုင်းများသည်သုံးစွဲသူများအား datacom နှင့် telecom application များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးစွမ်းရန်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ထားသည် သွင်ပြင်လက္ခဏာများ●အပူချိန်ညှိနိုင်ခြင်း● ၉.၉၅Gb / s မှ ၁၁.၁ Gb / s နှုန်းနှုန်းများဖြင့်အမြန်နှုန်း● 2.5W သုံးစွဲမှုအောက်တွင်● XFP MSA ...
10Gb / s 1550nm Multi-rate XFP Optical Transceiver OPXP551X3CDL80
OPXP551X3CDL80 10G 1550nm XFP transceiver မ်ားကို 10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW 802.3ae နှုန်းနှင့် 10G SONET OC-192 / SDH STM-64 အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး 9.953Gb / s မှ 11.1Gb / s အထိ data-rate နှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ XFP MSA တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းရောဂါရှာဖွေခြင်းကို I2C interface မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ Transceiver ဒီဇိုင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်နှင့်သုံးစွဲသူများကို datacom နှင့် telecom application များအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ●အပူပေးနိုင်ခြင်း● ၉.၉၅Gb / s သို့ ၁၁.၁ Gb / s နှုန်းနှုန်းဖြင့်ပံ့ပိုးမှု● Be Be ...
10Gb / s Bidi Multi-rate XFP Optical Transceiver OPXPB321X3CDL10
OPXPB321X3CDL10 10G XFP BIDI transceiver မ်ားကို 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW 802.3ae နှုန်းနှင့် 10G SOI OC-192 / SDH STM-64 အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး ၉.၉၅၃ ဂစ် / နှုန်းမှ ၁၁.၁၁ ဂဂ / စအထိဒေတာနှုန်းကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ XFP MSA တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ရောဂါရှာဖွေခြင်း I2C interface မှတဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ Transceiver ဒီဇိုင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်နှင့်သုံးစွဲသူများကို datacom နှင့် telecom application များအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ●အပူချိန်ညှိနိုင်ခြင်း● ၉.၉၅Gb / s သို့ ၁၁.၁ Gb / s နှုန်းနှုန်းများထောက်ပံ့နိုင်သည်။ အောက်တွင် ...
10Gb / s Bidi Multi-rate XFP Optical Transceiver OPXPB231X3CDL10
OPXPB231X3CDL10 10G XFP BIDI transceiver မ်ားကို 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW 802.3ae နှုန်းနှင့် 10G SOI OC-192 / SDH STM-64 အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး ၉.၉၅၃ ဂစ် / နှုန်းမှ ၁၁.၁၁ ဂဂ / စအထိဒေတာနှုန်းကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ XFP MSA တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းရောဂါရှာဖွေခြင်းကို I2C interface မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ Transceiver ဒီဇိုင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်နှင့်သုံးစွဲသူများကို datacom နှင့် telecom application များအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ●အပူချိန်ညှိနိုင်ခြင်း● ၉.၉၅Gb / s သို့ ၁၁.၁ Gb / s နှုန်းနှုန်းများထောက်ပံ့နိုင်သည်။ အောက်တွင် ...